“Psycho but It’s Okay” or “It’s Ok to not be Ok” ဇာတ်လမ်းတွဲမှ အဓိကသရုပ်ဆောင်များရဲ့ Instagram အကောင့်များ | News Bar Myanmar
“Psycho but It’s Okay” or “It’s Ok to not be Ok” ဇာတ်လမ်းတွဲမှ အဓိကသရုပ်ဆောင်များရဲ့ Instagram အကောင့်များ
“Psycho but It’s Okay” ကတော့ လက်ရှိ K-drama ချစ်သူများ အကြိုက်တွေ့နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်နေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ “Psycho but It’s Okay” ကြည့်ရင်း ပိတ်ရက်လေးတွေကို ဖြတ်သန်းနေတာ အကျင့်တောင် ဖြစ်နေလောက်ကြပါပီနော်။ ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီး ပုံဖော်ပေးနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း ပရိသတ်ရဲ့ရင်ထဲမှာ ရှိနေမှာအသေအချာပါပဲ။
ဒီ ဇာတ်လမ်းတွဲမှ အဓိကဇာတ်ကောင်များရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုဘဝကိုလည်း သိချင်နေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် “Psycho but It’s Okay” ဇာတ်လမ်းတွဲမှ အဓိကသရုပ်ဆောင်များရဲ့ Instagram account တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
1. Kim Soo Hyun (မွန်ဂန်ထယ်)
အပြုံးချိုလေးနဲ့ နူးညံ့တဲ့ သူနာပြုလေး မွန်ဂန်ထယ် တစ်ဖြစ်လဲ Kim Soo Hyun ရဲ့ Instagram account ကတော့ “@soohyun_k216” ပါနော်။ နာမည်ကြီး မင်းသားဖြစ်တာနဲ့အညီ လက်ရှိ Instagram follower အရေအတွက်ကတော့ ၅ သန်းပါနော်။ Follow မလုပ်ရသေးတဲ့သူများ Kim Soo Hyun ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝကို ကြည့်ချင်ရင်တော့ Follow လိုက်ကြပါအုံးနော်။
2. Park Gyu Young (နမ်ဂျူရီ)
ဂန်ထယ်ကို တဖက်သတ်ကြိုက်နေရတဲ့ သူနာပြုဆရာမလေး နမ်ဂျူရီ တစ်ဖြစ်လဲ မင်းသမီးလေး Park Gyu Young လည်း Instagram account ဖွင့်ထားပါတယ်နော်။ “@lavieenbluu” ပါ လက်ရှိ Follower အရေအတွက်ကတော့ ၁သိန်း ၄ သောင်းကျော်ပါ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Park Gyu Young ရဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း Instagram မှာ Follow မလုပ်ရသေးရင် Follow လိုက်ကြပါအုံးနော်။
3. Kang Ki Dong ( ဂျိုဂျယ်ဆူ)
ဂန်ထယ်ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း ဂျိုဂျယ်ဆူကိုလည်း ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့နေကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ ဂျေဆူရဲ့ Instagram account ကတော့ “@kkddoong” ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ Instagram follower အရေအတွက်ကတော့ ၂ သောင်းကျော်ပါ။ ဂျယ်ဆူဇာတ်ကောင်ကို အကောင်းဆုံး ပုံဖော်ပေးနေတဲ့ Kang Ki Dong ကိုလည်း Follow လိုက်ကြပါအုံးနော်။
4. Kim Joo Hun ( လီဆန်အင်)
ဒါကတော့ စာအုပ်တိုက်ရဲ့ CEO လီဆန်ဆင် အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Kim Joo Hun ရဲ့ Instagram အကောင့်ကို ဖော်ပြပေးမှာပါ။ “@zu_hun_kim” ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ Follower အရေအတွက် ၃ သောင်း ၆ ထောင်ကျော်ပါ။ ချောမောခန့်ငြားတဲ့ အာဂျူးရှိ ကိုလည်း Follow လုပ်ချင်သူများအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
5. Park Jin Joo (ယူဆောင်းဂျယ်)
CEO ရဲ့ တပည့်မလေး အဖြစ်သရုပ်ဆောင် ထားတဲ့ ချစ်စရာ Park Jin Joo ဟာလည်း Instagram account ဖွင့်ထားပါတယ်။ “@jinjoo 1224” ပါနော်။ Instagram follower ကတော့ ၄ သိန်းနီးပါးရှိနေပါပီ။ ချစ်စရာ မင်းသမီးလေးကို အားပေးချင်သူများလည်း Instagram မှာ Follow ထားလို့ရပါပီ။
6. Seo Ye Ji ( ဂိုမွန်ယောင်း)
စိတ်မကောင်းစရာကတော့ အချေမမ စာရေးဆရာမလေး မွန်ဂိုယောင်း အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသမီးချော Seo Ye Ji ကတော့ ကိုယ်ပိုင် Instagram account ဖွင့်မထားပါဘူး။ သို့သော်လည်း Seo Ye Ji ရဲ့ သတင်းတွေကိုတော့ သူမရဲ့ အေဂျင်စီရဲ့ Instagram account ဖြစ်တဲ့ “@goldmedalist_official” မှာ သွားကြည့်လို့ရပါတယ်။ သူမကတော့ Kim Soo Hyun နဲ့လည်း အေဂျင်စီ တူတူမှာရှိနေတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် သူမတို့ အေဂျင်စီမှ အနုပညာရှင်များရဲ့ အကြောင်းကို သိချင်ရင်တော့ Instagram မှာ Follower ထားဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Next ကိုရီးယားဘာသာနဲ့ Taeyeon ပြန်ဆိုခဲ့တဲ့ Into the Unknown (Frozen 2) သီချင်းရဲ့နောက်ကွယ်က စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းများ »
Previous « Yoo Jae Suk နှင့် Rain ကိုပြသနာတစ်ခုကြောင့် ငိုပြီးတောင်းပန်ခဲ့တဲ့ Lee Hyori